I-RR Trend Rider 2.0 Ukubuyekezwa - I-EA Forex Ehamba phambili | Abacebisi Abachwepheshe | Ama-Robots ama-FX
IkhayaI-TrendRider Rider 2.0Ukubuyekezwa kwe-Trend Rider 2.0
BEST Forex EA'S | UCHWEPHESHE abeluleki | FX amarobhothi I-TrendRider Rider 2.0 1
I-TrendRider Rider 2.0 iyisimiso sokuhweba forex yokuhlomula esakhiwe umthengisi professional kanye nomeluleki UVladimir Ribakov.
Njengoba uVladimir Ribakov ejwayele ukuba ngumthengisi okhokhelwa izikhungo, uhlangene nezixazululo ezenziwe ngokuzenzakalelayo zokuhweba forex izikhathi eziningi emsebenzini wakhe. Ngemuva kokubona impumelelo yesofthiwe kwezinye zezindleko ze-hedge ezithengiswa ngazo, wanquma ukusebenza neqembu lokuthuthukisa nelokwakha ukuthuthukisa inguqulo engcono nakakhulu yezokuhweba zomphakathi. Le software ishaya okulindeleke wonke umuntu!
Namuhla akukho muntu onesikhathi sokuhlaziya amashadi amaningi futhi enze amakhono amaningi nsuku zonke. Uma ufuna ukuhlala unenzuzo njengomthengisi, kudingeka uguqule amasu akho okuhweba. Kuyinto elula.
Thola futhi Uthathe Amathrendi Ukuze Ukhiye Nge-100-200 Pips, Futhi Thola i-100 $ Kuze ku-$ 1000 Ngosuku Nge-Push Of Button!
I-version ngcono ye-2 idalwe ngokubuyekeza isuquko sangempela sRs Trend Rider ngemuva kweminyaka engu-6 nezinsuku zokuhweba ze-1512 futhi kufaka phakathi amathuluzi athengisa kakhulu okuhweba.
I-TrendRider Rider 2.0 inikeza ezinye zezinto ezintsha ezintsha Izindlela ezilandelayo ezilandelayo njalo, ukuze ukwazi ukwenza imali kokubili ezimakethe ezikhulayo nokuwa.
Ngisho noma i-sRs i-automated ngokugcwele, uzobe usuphethe ukulawula okuphelele kwezohwebo. Uma isibonakaliso sibonakala futhi ucabanga ukuthi kuyingozi kakhulu, awudingi ukuyidayisa. Isofthiwe ngeke idayise ngaphandle kwemvume yakho.
ama-sRs Trend Rider 2.0 - Mayelana noMdali, Umhwebi Onobuchwepheshe Kanye noMeluleki Vladimir Ribakov
UVladimir Ribakov ubelokhu eyi-Forex trader iminyaka engu-11 nokubala. Lapho enganikezeli izingqungquthela emhlabeni wonke, uyaziqhenya kakhulu ngokuguqula abafundi bakhe babe abathengisi abanenzuzo. Lokhu kushiwo, uVladimir usesimweni esihle somsebenzi wakhe wokuhweba. Akuyona inhloso yakhe ukudala i-software yokuhweba ye-forex efana I-TrendRider Rider 2.0 ngemali.
Njengoba uVladimir wathi, "Ngizizwa sekuyisikhathi sokubuyisela emphakathini wokuhweba onginike kakhulu."
UVladimir waqasha iqembu ukuba aqale isikhungo semfundo esibizwa ngokuthi I-Traders Academy Club kanye nokwabelana ngolwazi lwakhe lokuhweba okukhulu kakhulu. Ukuhweba kwe-FX kumnike okungaphezu kwalokho ayekucabanga ngakho. Ufuna ngempela ukuthi abanye bathole zonke izinzuzo zokuhweba ukuze baphile.
sRs Trend Rider 2.0 - Mayelana Namathuluzi Wokuhweba Ama-Forex Odinga Ukuphumelela
Uma ungathí sina mayelana nokuhweba kwe-FX, udinga ukusebenzisa isofthiwe engcono kakhulu. Yilapho i-sRs ingena khona.
I-TrendRider Rider 2.0 linikeza ezinye izindlela ezintsha zokulandela amasu ahlala njalo, ukuze ukwazi ukwenza imali kokubili ezimakethe ezikhulayo nokuwa.
The I-TrendRider Rider 2.0 inezo zonke amathuluzi nezakhi ukwenza kube isofthiwe yokuhweba ephelele:
Ideshibhodi yokuhweba: Kusuka kudeshibhodi uzokwazi ukubona izimpawu ezicacile, ezilula ukuqonda ezichaza imithetho ethize yokuhweba ye-algorithm yamandla sRs.
Umphathi Wezokuhweba: Umphathi wezokuhweba unciphisa inqubo yonke ngokususa isici sengqondo. Faka, qapha, futhi uphume ngokuhweba ngempumelelo ngokuvumela Imodi Yokuzenzakalela. Amaklayenti akho azozenzekela ngokuzenzakalelayo ngokusho kwamathuluzi okuhweba kudeshibhodi. Ungaphinda uqalise ukulawulwa kokulawula nganoma yisiphi isikhathi.
Kulungile, ake sidlule ukuhweba okujwayelekile kwe-SRs Trend Rider…
ISIQEPHU 1: LINDA INDLELA YOKUPHUMA I-SPOT YEBHAYIBHELI - Thola inkomishi yekhofi bese uyiyeka Ideshibhodi yokuhweba ngikuqaphele. Noma, sebenzisa I-sRs Scanner uma ungathanda ukuhweba ngamashadi amaningi - lokho KUSHA!
ISIQEPHU 2: QINISISA ISEBE - Qinisekisa ukuhweba kanye Umphathi wezohwebo uzothatha lapho.
ISINYATHELO 3: JABULA ISIKHATHI SAKHO SAMAHHALA NAMAKHONO AYINYE
Uma ususha emakethe ye-forex, Ama-sRs athambekele ku-Rider 2.0 unakho konke okudingayo ukuze uphumelele!
ama-sRs Trend Rider 2.0 - Ungayithola Kanjani Inzuzo Ku-Vladimir Ribakov's Forex Trading Software
Uma ulanda I-TrendRider Rider 2.0 iphakheji, uzothola imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo sokufaka into ngayinye ku-Metatrader 4 (MT4). Uzothola futhi imiyalelo yokuthi ungayenza kanjani ukuhweba kwakho kokuqala bese usetha amazinga akho okubekezeleleka engozini.
Ungathengisa izikhathi eziningi ozimele nama-currency njengoba ufuna. U-Vladimir Ribakov neqembu lakhe basanda kungeza I-sRs Scanner yokudayisa kalula amashadi amaningi njengoba ufuna ngenkathi ugcina ishadi elilodwa kuphela elivulekile. Lesi sici esisha senza ukuhweba amashadi amaningi elula kakhulu futhi ephumelelayo.
Njengoba kukhulunywe ngenhla, ukuhweba cishe kuzenzakalelayo ngokuzenzakalelayo. Uzothola izexwayiso uma kutholakala amasu okuhweba. Konke okwenziwe ukukhishwa nokuskena nokuhlelwa kwe-oda kwenziwa kuwe. Konke okudingeka ukwenze ukuchofoza inkinobho eyodwa noma nini lapho ufuna ukwenza ezohwebo.
Ngale ndlela, uhlale ulawula ngokugcwele konke okuqhubekayo ku-akhawunti yakho. Futhi ngeke neze ube engozini yephutha lobuchwepheshe lapho isofthiwe yokuhweba ihamba kancane futhi idlula ngaphandle kwemvume yakho.
sRs Trend Rider 2.0 - Ungakuthola Kanjani Ukufinyelela Kulesi Software Yokuhweba Okuyinzuzo
Kunezindlela ezimbili ongafinyelela kuzo I-TrendRider Rider 2.0. Ungayithengela ngentengo yesikhathi esisodwa ehlisiwe kuleli khasi, noma ungabhalisela i-akhawunti ye-brokerage nge-akhawunti yakho kanye nomunye wabathengi bethu abathandayo.
I-OPTION #1: UKUFAKA UKUHLOLA - Le inketho ethandwa abathengisi asebevele benama-akhawunti okuhweba noma abangakwazi ukuvula i-akhawunti nomunye wabathengi bethu abasohlwini ngenxa yemikhawulo engokomthetho, njengezwe lokuhlala. Abanye abathengisi ngeke bavume izakhamizi zase-US, ngokwesibonelo, ukubhalisela i-akhawunti. Kungakho ungahlala uthenge isoftware nge-PayPal noma ikhadi lesikweletu / lebhange bese ulikhipha ngokushesha.
I-OPTION #2: UKUVULA I-ACCOUNT - Abathengisi abangafisi ukusebenzisa imali ukuthola lo mkhiqizo, inketho ethandwayo ukuvula nokuxhasa i-akhawunti yomthengisi nomunye wabathengi abathandayo. Akunazindleko kuwe futhi uzokwamukela isoftware ngokushesha nje lapho i-akhawunti ixhaswe.
KUBALULEKILE: Yonke idatha yokuhweba I-TrendRider Rider 2.0 webhusayithi sangempela futhi esobala ngokugcwele.
Inqubomgomo Yokubuyiselwa: Umthengisi unikeza isiqinisekiso semali emuva kwezinsuku ze-45. Uma isofthiwe ye-forex ihlulekile ukuxhumana nje nomthengisi nge-imeyili futhi uzokuthumela yonke imali yakho!
I-TrendRider Rider 2.0 itholakala ngentengo engakholeki, okungukuthi i-$ 297 kuphela. Ngakho-ke ungalindi ukubamba ikhophi yakho!
Vakashela isayithi le-Trend Rider 2.0 elisemthethweni
I-RR Trend Rider
I-Stategy Following Trends
I-Trend Rider 2.0
I-SRS TREND RIDER 2.0 - ISIQEPHU SOKUPHAKATHI SOFUNDA YOKUTHUTHA Umthengisi othandekayo we-Forex, IZINDABA! Ukubuyekezwa kwe-Trend Rider 2.0 - I-Professional Forex Trading Software Thola ulwazi olwengeziwe namabhonasi lapha: https://www.bestforexeas.com/srs-trend-rider-2-0-review/ sRs I-Trend Rider 2.0 iyindlela yokuhweba ye-forex ezuzisayo eyadalwa ngumhwebi ochwepheshe kanye nomeluleki uVladimir Ribakov. Njengoba uVladimir Ribakov ejwayele ukuba ngumthengisi okhokhelwa izikhungo, uhlangene nezixazululo ezenziwe ngokuzenzakalelayo zokuhweba forex izikhathi eziningi emsebenzini wakhe. Ngemva kokubona impumelelo yesofthiwe kwezinye zezindleko zezingodo ezazithengiswa ngazo, wanquma ukusebenza nokuthuthukiswa nokuklama... Funda kabanzi "